Taageero iyo Adeeg - Jinan Apex Makiinado Qalabka Co., Ltd.
Qalabka ATC Albaabka Alwaaxyada Alwaaxa Qalabka Mashiinka Xaraynta
1. adeegga iibka ka hor: iibkeennu wuu kula soo xiriiri doonaa si aad u ogaatid shuruudahaaga ku saabsan cnc router faahfaahinta iyo nooca shaqo ee aad qaban doontid, ka dib waxaan kuu soo bandhigi doonnaa xalka ugu fiican adiga. Si ay u xaqiijin karto macmiil kasta inuu helo mashiinkiisa dhabta ah ee loo baahan yahay.
2. adeegga inta lagu jiro wax soo saarka: waxaan soo diri doonaa sawirro inta lagu guda jiro wax soo saarka, si ay macaamiisha u ogaadaan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan habka loo maro mashiinadooda ayna u soo gudbiyaan talooyinkooda
3. adeegga ka hor rarka: waxaan sawiro ka qaadi doonnaa oo aan la xaqiijin doonnaa macaamiisha qeexitaannada amarkooda si looga fogaado qaladka mishiinnada samaynta khaldan.
4. adeegga ka dib dhoofinta: waxaan u qori doonnaa macaamiisha waqtiga ay mashiinku baxayo, sidaa darteed macaamiisha ayaa diyaarin ku filan u sameyn kara mashiinka.
5. adeegga ka dib imaatinka: waxaan la xaqiijin doonnaa macaamiisha haddii mashiinku xaaladdiisa wanaagsan yahay, oo aan fiirinno haddii ay jiraan wax dayactir ah oo maqan.
6. adeegga waxbaridda: waxaa jira xoogaa buug ah iyo fiidiyowyo ku saabsan sida loo isticmaalo mashiinka. Haddii macaamiisha qaar ay su'aal dheeri ah ka qabaan, waxaan leenahay farsamo yaqaan xirfadle ah oo kaa caawiya rakibidda iyo barashada sida loo adeegsado Skype, wicitaan, fiidiyow, boostada ama hago, iwm.
7. adeegga dammaanadda: waxaan bixinnaa 12 bilood oo dammaanad ah mashiinka oo dhan. Haddii cillad kasta oo ka mid ah qaybaha mashiinku ku jiro muddada damaanadda, waxaan ku beddelaynaa bilaash.
8. adeeg muddo-dheer ah: waxaan rajeyneynaa in macmiil kastaa uu si fudud u isticmaali karo mashiinkeenna oo uu ugu raaxaysan karo isticmaalkiisa. Haddii macaamiisha ay wax dhibaato ah ku qabaan mashiinka 3 ama ka badan sano, fadlan si xor ah noola soo xiriir.
1. Waa maxay mashiinka leysarka Cnc?
Iyada oo loo marayo mabda'a qiiqa laser, Waxaa lagu rakibay nidaamka dhaqdhaqaaqa mashiinka si laser-ku uu si wax ku ool ah ugu shaqeyn karo sheyga.
2. Waa maxay noocyada mishiinka leysarka?
1) laser laser CO2: laser C2 caadi ah / laser isku dhafan CO2 (laser laser Co2 ee biraha iyo nonmetal)
2) Mashiinka goynta laser-ka
3) Mashiinka Calaamadaha: Mashiinka Calaamaynta Fiber Laser / Mashiinka Calaamadaha Laserka Co2
3. Qaabeynta ugu weyn ee mashiinka leysarka (qalabka)
1 tuubada leysarka (qaybo la cuni karo) + leysarka korontada siiya 2 nidaamka xakamaynta 3 miiska shaqada (miiska mindi, miiska malabka) 4 nidaamka wadista: suunka, kubbadda (isku dheji leysarka Co2) 5 mootada iyo wadista (isla mashiinka xardho) 6 Saddex muraayad , Hal muraayad diirada saaraya 7 meeleynta nalka casaanka 8 hagaha tareenka (guud: XY axis / cut cut: XYZ axis) + slider 9 OMRON switch switch
Ikhtiyaari ah: miiska qaadista, bamka biyaha (chiller), nidaamka sifaynta, marawaxada qiiqa, kombaresarada hawada
4. Maxay yihiin afarta nooc ee qaabeynta mashiinka leysarka?
Qiiqa Hawada: Qiiqa waxaa loo tuuray banaanka
Kombaresarada hawada: goynta kaabayaal, xardho kaabayaal, daadinta burburka
Chiller: Iska yaree kuleylka tuubbada leysarka si loo hubiyo shaqada muddada-dheer
Bar cas: Laydhka lama arki karo, markaa isticmaal emitter cas si aad u go'aamiso booskiisa
5. Maxay yihiin soosaarayaasha leysarka fiber-ka?
Gudaha: Raycus UK: GSI, laser JK waa hoosaad
Jarmalka: IPG Mareykanka: Nlight
6. Fiber laser magaabay wiil
7. dhumucda goynta ugu badan iyo xawaaraha goynta ee fiber laser magaabay wiil Dhumucda goynta ugu badan
300w birta kaarboon ≤ 3 birta birta ah stainless 1.2
500W Kaarboon Kaarboon tain 6 Bir Daxal ah ≤ 3
750w kaarboon birta ah ≤8 birta birta ah ≤4
1000w kaarboon birta ah ≤ 10 birta birta ah stainless 6
2000w Carbon steel ≤20 ahama bir Steel8
8. Nooca tuubbada laser-ka ee loo yaqaan 'laser laser tube'
9. Waa maxay awooda tuubada leysarka CO2?
Awooda guud waa 40w, 60w, 80w, 100w, 130w, 150w, 180w, 280w
Way ka weyntahay awoodda tuubada leysarka, weynaanshaha dhumucda goynta waa, waana sii weynaataa awooda, marka la jarayo walxo isku mid ah, si dhaqso leh ayey u tahay in la gooyo. Awoodda ayaa ka sii weyn, sheyga ayaa ka qaalisan. Awoodda ayaa ka sii weyn, saamaynta xardhan ayaa ka sii xun. Awoodda weyni waa, xasiloonida ayaa ka sii xun. 60w waa awooda ugu haboon ee xardho.
10. Nolosha adeegga tuubbada laser-ka